ယဲလိုးစတုန်း အမျိုးသားဥယျာဉ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ပါ့ခ် ကောင်တီ ၊ ဝိုင်အိုမင်း
တီတန် ကောင်တီ ၊ ဝိုင်အိုမင်း
ဂျယ်လတင် ကောင်တီ ၊ မွန်တားနား
ပါ့ခ် ကောင်တီ ၊ မွန်တားနား
ဖားမောင့် ကောင်တီ ၊ အိုင်ဒဟို
44°36′N 110°30′W﻿ / ﻿44.600°N 110.500°W﻿ / 44.600; -110.500ကိုဩဒိနိတ်: 44°36′N 110°30′W﻿ / ﻿44.600°N 110.500°W﻿ / 44.600; -110.500
၂,၂၁၉,၇၉၁ ဧက (၈,၉၈၃.၁၈ km2)
မတ် ၁၊ ၁၈၇၂ (၁၈၇၂-မတ်-၀၁)
၄,၂၅၇,၁၇၇ (၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း)
အမျိုးသားဥယျာဉ် ဝန်ဆောင်မှု ဌာန
ရွေးချယ်သည့်စံနှုန်း vii, viii, ix, x
ယဲလိုးစတုန်း အမျိုးသားဥယျာဉ် သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဝိုင်အိုးမင်းပြည်နယ်၊ မွန်တားနားပြည်နယ် နှင့် အိုင်ဒါဟိုပြည်နယ် တို့ အတွင်း တည်ရှိသော အမျိုးသား ဥယျာဉ် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် ကွန်ဂရက်မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန် သမ္မတ ယူလီဆီး အက်စ် ဂရန့် မှ ၁၈၇၂ ခုနှစ် မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးကာ ဥပဒေ တွင်းသို့ ထည့်သွင်းပေးခဲ့သည်။  ယဲလိုးစတုန်းသည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အတွင်းမှ အမျိုးသား ဥယျာဉ် ဖြစ်သော်လည်း ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး အမျိုးသား ဥယျာဉ် အဖြစ်လည်း လူသိများကြသည်။  ထိုအမျိုးသား ဥယျာဉ်မှာ သားရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကြောင့် လူသိများပြီး ဘူမိအပူရှိန် နေရာများကြောင့်လည်း လူသိများသည်။ အထူးသဖြင့် အိုးလ်ဖိတ်ဖူး ရေပူပန်း အမည်ရှိသော နေရာ ဖြစ်ကာ ထိုနေရာသည် ရေပန်း အစားဆုံး နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ဂေဟစနစ် အများအပြား ရှိသော်လည်း အယ်လ်ပိုင်းဆန်သော သစ်တောဒေသ များမှာ အများဆုံး ဖြစ်သည်။ အလယ်တောင်ပိုင်း ရော့ကီး သစ်တော ဂေဟ ဒေသ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
ရှေးဦး အမေရိကန်လူမျိုးများသည် ယဲလိုးစတုန်းဒေသ တစ်ဝိုက်တွင် နေထိုင်ခဲ့သည်မှာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁,၁၀၀၀ ခန့်ကတည်းကပင် ဖြစ်သည်။ ၁၉ရာစု အစောပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်း တောင်ပေါ်တွင် ရှာဖွေစားသောက်သူများ ဝင်ထွက်သွားလာမှုမှ လွဲ၍ ယဲလိုးစတုန်းဒေသကို စနစ်တကျ စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ခြင်းမှာ ၁၈၆၀ ခုနှစ်များ ၏ နှောင်းပိုင်း အထိ မရှိခဲ့ပေ။
↑ Yellowstone, the First National Park။
↑ U.S. Statutes at Large, Vol. 17, Chap. 24, pp. 32–33. "An Act to set apartacertain Tract of Land lying near the Head-waters of the Yellowstone River asapublic Park." [S. 392]။
↑ Biosphere Reserve Information – United States – Yellowstone။ UNESCO – MAB Biosphere Reserves Directory။ UNESCO (August 17, 2000)။ August 4, 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ August 14, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Park Facts။ National Park Service (December 22, 2015)။ 2015-12-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယဲလိုးစတုန်း_အမျိုးသားဥယျာဉ်&oldid=373933" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၇၊ ၀၅:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။